‘जोखनामा वर्तमान’ कवितासङ्ग्रह लोकार्पण
काठमाडौं – साहित्यकार डा. नवराज सुब्बाको कवितासङ्ग्रह ‘जोखनामा वर्तमान’ ई–बुक अनलाइन बजारमा आएको छ । हाम्रो आइडियाले प्रकाशित गरेको उक्त ई–बुकलाई थुप्रै डटकमले बजार व्यवस्थापन गरेको छ । यस सङ्ग्रहमा वि.स. २०६९ देखि हालसम्म रचित कवि सुब्बाका कविता, मुक्तक र गीत सङ्ग्रहित छन् । विविध स्वादका ८६ वटा रचनाहरु ई–बुकमा सङ्ग्रहित छन् । कवितामा जीवन […]
हरि पौडेल /नेदरल्याण्ड के भनु कसरी एक्लो बिताएँ नयाँ वर्षमा आफुले आफैलाई फकाएँ नयाँ वर्षमा हुन त केही मुखमा राख्न मन लागेन तिम्रो फोटो हेरि-हेरि म्वाई खाएँ नयाँ वर्षमा बोलाउँ भने कसो अझै ग्रीनकार्ड भा छैन यसपालि पनि तिमीलाई सताएँ नयाँ वर्षमा मर्द बनि बसे थें कहिल्यै रुंदिन भनेर सम्झी तिम्रो मुहार आंसू चुहाएँ नयाँ […]